Ezempilo: Ingcuphe yokufa ebantwaneni
UMBIKO uveza ukuthi kufanele kusukunyelwe ukuzalwa kwezingane zinesisindo esincane kakhulu ngoba lokhu kuzibeka engozini
LUNGI LANGA | May 28, 2019
UCWANINGO lukhombisa ukuthi inqwaba yabantwana abazalwa benesisindo esincane basuke besengozini yokushona besebancane.
Lolu cwaningo olwenziwe yinhlangano yezempilo emhlabeni wonke iWorld Health Organization (WHO), yi-United Nations Children’s Fund (UNICEF) nesikhungo semfundo ephakeme iLondon School of Hygiene & Tropical Medicine luveze ukuthi zilinganiselwa ku-20 million izingane ezizalwe zinesisindo esincane kakhulu ngo-2015. Lo mbiko ophume kuThe Lancet Global Health ungowokuqala ukuveza inkinga ekhona yezingane ezizalwa zincane kakhulu nokuyinkinga yezempilo ebeka ingcindezi esimeni sezempilo emazweni ahlukene.
Kukholakala ukuthi * -80% wezingane ezingu-2.5 million ezishona njalo ngonyaka zisuke zinesisindo esincane ngokweqile. Izingane ezizalwa zinesisindo esincane ngokweqile (ezinesisindo esingaphansi kuka-2500g) zivame ukuthi zibe nezinkinga eziningi zezempilo uma zikhula - ezinye azikhuli kahle. Ezinye ziphathwa yizifo okubalwa kuzo isifo sikashukela nesenhliziyo uma sezindala.
UDkt Mercedes de Oni, ongamele ezokudla ku-WHO, uthe ukuzalwa kwezingane zinesisindo esincane wudaba olubucayi futhi kubalulekile ukuthi amazwe azihluphe ngokuthi azi ukuthi kudalwa yini.
Uthe ngokujwayelekile izingane ezizalwa zinesisindo esincane kusuke kuyizingane ezizalwa singakafiki isikhathi sokuthi zizalwe.
UDe Oni uthe kwamanye amazwe bathola ukuthi izingane zizalwa ngesikhathi okufanele zizalwe ngaso kodwa zizalwe zinesisindo esincane nokuyinto ekhathazayo. “Kubalulekile ukuqonda nokubhekana nezizathu eziholela (ekutheni izingane zizalwe zinesisindo esincane) emazweni anale nkinga,” kusho uDe Oni.
Lo mbiko uveza ukuthi ayidlangile kakhulu emazweni asathuthuka kuphela kodwa ivamile nasemazweni adla izambane likapondo njengase-Europe.
Abacwaningi bathe kufanele amazwe omhlaba asebenzisane ukuqhamuka namasu okulwa nezinkinga zezempilo ezihambisana nokuzalwa kwezingane zinesisindo esincane kakhulu.
Bathe okunye okungenziwa ngamazwe kungawukuqinisekisa ukuthi omama badla ngendlela efanele uma bekhulelwe nokuthi basheshe balashelwe izifo ezibahlasela bekhulelwe. Baqhube bathi kubalulekile ukuthi omama abakhulelwe bathole usizo lwezempilo olukhethekile kuze kube kufika isikhathi sokuthi babelethe.
“Izibalo zokufa kwezingane, ukugula kwazo nokukhubazeka kwazo sezizelwe kungagwemeka uma omama benganakekelwa ngendlela ngesikhathi besakhulelwe,” kusho abacwaningi.